SHIRKII HESHIISIINTA SOOMAALIDA OO MAANTA KA FURMAY NAIROBI
Nairobi 1st November 2001
Madaxweynaha Kenya Danial Arab Moi ayaa maanta (1/11/2001) si rasmi ah uga furay Hoteelka Inter-Continental ee magaalada Nairobi shir lagu heshiisiinayo Dawladda MKG ah iyo Hogaamiye Kooxeedyada mucaaradka ku ah ee ku bahoobay golaha SRRC, isagoo ku booriyay hogaamiyayaasha soomaalida inay ka heshiiyaan khilaafaadkooda, waayo ummadda Soomaliyeed waxay ka daaleen dagaalka iyo dhibaatada Dawladd la'aanta leedahay .
Waxaa markaa kadib ka hadlay shirkaa Madaxweynaha Dawladda KMG ah Cabdiqassim Salaad Xasan oo uga mahad celiyay Dawladda Kenya gogosha ay maanta u fidisay dadka Soomaalida, isagoo isna sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahal la galo kooxaha mucaaradka.
Dhanka golaha SRRC waxaa u hadlay Mawliid Macaana Maxamuud oo ka sheegay shirka inay diyaar u yihiin hawlaha nabadeynta iyo sidii loo dhisi lahaa Dawlad loo dhan yahay . Waxaa shirkaa ka soo qaybgalay madax badan oo Dawladda Kenya, uuna ku jiro Madaxweyne Ku-Xigeenka, Wasiirka Caafimaadka iyo xubna ku jira Baarlamaanka wadanka Kenya .
Waxaa shirka ka maqnaa Hogaamiye Kooxeedyo ku jira golaha SRRC oo iminka ku sugan dalka Ethiopia, ayna ka mid yihiin Xuseen Ceydiid, Muuse Suudi, Col. Shatiguduud , iyo qaar kale .
GALAYDH OO KU NOQONAYA MUQDISHO!
Washington DC- 1st November 2001
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Dawladda KMG ah Cali Khaliif Galeydh ayaa u sheegay maanta bbc-da inuu ku qanacsan yahay go'aankii uu Baarlamaanka kala noqday kalsoonida Dawladiisa todobaadkii hore, walow uu jeclaan lahaa in codka kalsooni noqoshada uu dhaco isagoo dalka ku sugan ,laakiinse uu qirsan yahay in Baarlamaanku xaq u leeyahay tallaabada uu ku dhaqaaqay , ayidsan yahayna go'aankooda , waayo waxay bilaw fiican u tahay dimuquraadiyadda dalka .
Wuxuu kale oo uu sheegay inuu hawlo badan oo muhiim ah oo looga qancinayo xubnaha golaha ammaanka sidii taageero loogu fidin lahaa Dawladda KMG ah inuu soo qabtay, iminkana uu ku guuleystay in Qaramada Midoobay ay go'aamiyeen in wefdi hubinaya nabadgelyada loo diro dhowaan Muqdisho , inkastoo maamulka Mareykanka aad moodo inay ka maagayaan xaalkeena .
Wuxuu kaloo sheegay inuu balamo la xiriira arrinka Somalia kala yeeshay Wasaaradda Dibedda iyo xubno ka tirsan Aqalka Sare ee Senat-ka iyo ka wakiilada, si wanaagsana ugu guuleystay inuu ka dhaadhiciyo arrimaheena .
Wuxuu ugu danbeyn Cali Khaliif carabaabay inuu mar kale sii mari doono Xaruunta Qaramada Midoobay ee New York, si uu ugu mahad celiyo Xoghayaha Guud iyo wakiilada dalalka Carabta iyo dalalka Yurub u joogo New York, oo uu ugu horeeyo Danjiraha Norway gacantii ay siiyiin qadiyadda Soomaliya , isagoo isla markaana jecel inay is-arkaan madax ka tirsan Xukuumadda Kanada , intii aanu ku laaban Muqdisho , si uu xilka u wareejiyo